दीपेन्द्रसँग बिवाह नजुरेका ४ महिला ! - Khabar Nepali
होमपेज / रोचक / दीपेन्द्रसँग बिवाह नजुरेका ४ महिला !
दीपेन्द्रसँग बिवाह नजुरेका ४ महिला !
आजभन्दा २० वर्ष अघि दरबार ह’ -त्या’का-ण्ड हुन्नथियो भने युवराज दीपेन्द्र जिवितै हुन्थे । उनका जीवनमा कुनै राजकुमारी आउँथिन्।
त्यसो त दीपेन्द्र स्वयं र दरबारले समेत दीपेन्द्रका लागि राजकुमारीहरु रोजेको थियो । कुनै दीपेन्द्रले मन पराएका त कुनै रानी ऐश्वर्या र उनकी सासु मुमा बडामहारानी रत्नले मनपराएका ।
विधाताले यस्तो अवस्था बनायो कि राजकुमारी बन्ने सम्भावना बोकेकाहरुको दीपेन्द्रसँग कहिल्यै विवाह नजुर्ने गरी च्याप्टर क्लोज नै भयो ।
दीपेन्द्र आकर्षक जीउडालका उनी पढाईमा पनि तेज थिए । भावी राजामा हुनुपर्ने गुण थियो । गीत गाउने देखि पढाईमा समेत तेज उनी खेलप्रेमी पनि थिए । त्यसैले उनको राजकुमारी बन्ने सपना धेरै युवतीहरुले देखेका थिए । तर, दरबारह- त्या’का’ण्डसँगै त्यो सपना चकनाचुर भयो ।
दरबार ह’ -त्या’का-ण्ड भएको १९ वर्ष बितिसकेको छ । उक्त ह- त्या’का-ण्ड’मा विभिन्न शं’का उपशंका भएपनि सरकारी प्रतिवेदनले दोष पूर्व युवराज दीपेन्द्र शाहलाई देखाएको छ । उनको विवाहको कुरा चल्दै थियो । दीपेन्द्र जसलाई चाहन्थे उसलाई उनकी आमा तत्कालिन रानी ऐश्वर्या चाहन्नथिइन् ।
देवयानीसँग दीपेन्द्र दरबार ‘ह-त्या’का-ण्डको केही समय अघिसम्म पनि टेलिफोन सम्पर्कमा रहेको बुझिएको छ । उक्त ह-त्या’का’ण्डपछि देवयानीप्रति निकै चासो भयो ।
देवयानीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरिन् । ऐश्वर्य सिंहसँग उनको विवाह भएको १४ वर्ष बितिसकेको छ । ऐश्वर्य तत्कालिन भारतीय मानव संशाधनमन्त्री अर्जुन सिंहका नाति हुन् । यी दुईको विवाहमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री डा। मनमोहन सिंह, कँग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी समेत पुगेका थिए ।
डा. करण सिंह देखि भुटानका पूर्व राजा जिग्मे सिंगे वाङचुक पनि पुगेका थिए । तर, निम्तो गरिएको तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह विवाहमा सहभागी भएनन् । भारतभरका पूर्व राजखानदानहरु विवाहमा जमघट भएका थिए ।
विवाहको समयमा देवयानी ३६ वर्षकी थिइन् । ऐश्वर्य भने उनीभन्दा चार वर्षले कान्छा ३२ वर्षका थिए । दरबार ह-त्याकाण्डको छ वर्षपछि विवाह भएको थियो । त्यतिबेला देवयानी संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित कार्यालयमा जागिरे थिइन् ।
तत्कालिन युवराज दीपेन्द्र शाहसँग विवाह गराउन तत्कालिन मुमा महारानी रत्नले चाहेकी अर्की महिला हुन् सुप्रिया शाह । उनका पिता प्रदीपविक्रम शाह पूर्व सैनिक हुन् । पूर्व रानी रत्नका अंगरक्षक भएकाले उनी दरबारसँग परिचित नै थिइन् । त्यसमाथि तत्कालिन अधिराजकुमारी श्रुतीकी साथी हुन् सुप्रिया ।
उनको दीपेन्द्रसँग पनि स’म्बन्ध जोडिएको थियो । बुढानिलकण्डमा कक्षा ७ मा पढ्दा नै दीपेन्द्रले सुप्रियालाई चाहेका थिए । उनलाई प्रेमपत्र पनि लेखेको विषय मैंले देखेको दरबारमा विवेककुमार शाहले उल्लेख गरेका छन् । तर, सुप्रियालाई प्रेमपत्र लेखेकोमा ऐश्वर्याले गा-‘ली गरेकेी थिइन् ।
दीपेन्द्रले नाताले दाजुबहिनी थिए । तर, ठकुरी परिवारमा विवाह गर्न छेकबार नपर्ने स’म्बन्ध थियो त्यो । दीपेन्द्र र सुप्रियाका हजुरआमाहरु नाताले दिदीबहिनी थिए । रत्न पनि आफ्ना ‘अंगरक्षक’ समेत रहेका प्रदीपविक्रमकी छोरी सुप्रियासँग विवाह गरोस् भन्ने चाहन्थिन् ।
दीपेन्द्र पनि किशोरावस्थासम्म सुप्रियालाई रानी बनाउन चाहन्थे । तर, रानी ऐश्वर्या उनलाई बुहारी बनाउन चाहन्नथिइन् । यो विषय विवेककुमार शाहले लेखेका छन् । यसको मुख्य कारण नजिकको नातामा विवाह गर्दा सम्बन्ध राम्रो हुँदैन भन्ने र बच्चा पनि राम्रो जन्मँदैन भन्ने थियो । ऐश्वर्या सुप्रिया रानी बन्न योग्य मान्दिनथिइन् ।
दरबार’ह- त्या’का’ण्डले सुप्रियाको रानी बन्ने सम्भावना समाप्त पारिदियो । दरबार ‘ह- ‘त्या’का-ण्डको दुई दशक पुग्न लाग्दा भने उनले विनयविक्रम राणासँग विवाह गरेकी छिन् । राणाको यसअघिको पत्नीसँग पा’रपाचुके भएको थियो । त्यसपछि अविवाहित रहँदै आएकी सुप्रियासँग यही मंसिरमै विवाह भयो ।
सुप्रियासँग विवाह स-म्बन्ध’ गाँसेका विनयविक्रमको तत्कालिन राजा वीरेन्द्रका अंगरक्षक शान्तकुमार मल्लकी छोरी साधना मल्लसँगको सम्बन्ध टुटेको थियो । सम्बन्ध टुटेपछि विनयको सुप्रियासँग विवाह भएको छ । उनी हाल दुई तारे जर्नेल भएर पश्चिम पृतनाका पृतनापति छन् । उनी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रुचाएका जर्नेल हुन् । सुप्रिया अविवाहित नै रहने धेरैको अनुमान गलत सावित भएको छ । उनले ५० टेक्न लाग्दा विनयविक्रमलाई दुलाहाको रुपमा रोजेकी छिन् ।
दीपेन्द्रका लागि रानी ऐश्वर्याले रुचाएकीमा गरिमा राणा थिइन् । एसएलसी टपर थिइन् । केशर शमशेरका सन्तति लोकभक्त राणाकी छोरी थिइन् गरिमा । उनलाई श्रुतीले पनि रुचाएकी थिइन् । श्रुतीकी नन्द गरिमाप्रति दीपेन्द्रको भने आकर्षण देखिएको थिएन । विवेककुमार शाहले पुस्तकमा लेखे अनुसार श्रुतीले दीपेन्द्रको २९ औं जन्मदिनमा गरिमासँग विवाह गर्नुपर्छ भन्दा झा-पड हा-नेका थिए । त्यतिबेला श्रुती ग’र्भवती थिइन् ।
इटन कलेजमा पढ्दा दीपेन्द्रको जापानी युवतीसँग पनि ‘प्रेमसम्बन्ध’ बसेको थियो । ती युवती दीपेन्द्रलाई भेट्न नेपालसम्म आएकी थिइन् । नेपाल आएकी ती जापानी युवतीसँग दीपेन्द्रलाई समस्या नै परेको थियो । उनी दीपेन्द्रसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् । एडीसी गजेन्द्र बोहराले युवतीलाई एयरपोर्ट पुर्याएका थिए । ती युवतीले दीपेन्द्रलाई गा’-ली ग-लौज’ गर्दै ‘पा-ग-ल भन्दै कुकुरको मृ’त्यु म’-र्नु’ भनेकी थिइन् भनेर बताइन्छ ।